विप्लव फेरि एमाओवादीमा फर्किने ? — Ujyaalo Lalteen
गृहपृष्ठ » पत्रपत्रीका → विप्लव फेरि एमाओवादीमा फर्किने ?
विप्लव फेरि एमाओवादीमा फर्किने ?
April 30, 2016१८२ पटक
काठमाडौं – टुटफुटबाट गुज्रेका माओवादीहरुबीच एकीकरणको प्रयास घनिभूत भएको छ । क्रान्तिकारी माओवादी र एमाओवादीबीच वैशाख १५ गते निर्णायक वार्ता हुने एमाओवादी स्रोतले बताएको छ । वार्ताले सकारात्मक निश्कर्ष निकाल्ने पनि सो स्रोतको दावी छ । यो वार्तामा दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरु बस्ने बताइएको छ ।
दुई वर्षदेखि यी दुई ठूला माओवादीहरुबीच औपचारिक/अनौपचारिक रुपमा एकता वार्ता चल्यो । एमाओवादी र संसद्वादीबीच संविधान जारी गर्नका लागि १६ बुँदे सहमति गर्नुपूर्व एकताको तिथि जुराइरहेका थिए । १६ बुँदे सहमतिपछि राजनीतिक परिस्थिति नयाँ मोडमा पुग्यो । एकथरीले नयाँ संविधानलाई उत्कृष्ट भने र अर्काेथरिले जलाउँदै हिँडे । यसले एकता निकै टाढा पुगेको अनुभूत गरिएको थियो ।
पार्टी नाम, नेतृत्वको बारेमा पनि सबै पक्ष खुल्ला नै छ । पार्टीको नयाँ नामको बारेमा सबै पक्षले आआफ्नो प्रस्ताव राखेका छन् । नयाँ नामका बारेमा धेरै माथापच्ची हुने देखिदैंन । रगत र पसिनाले स्थापित भएको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) नै राख्नु सही रहेको मात्रिका यादवको मत रहेको छ । यादवले विगतको संगठनात्मक सञ्चालनको विधिलाई पनि नयाँ पार्टीमा बदल्नुपर्ने मत राखेका छन् । सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको अवस्थामा एकता संयोजन समिति बनाएर तत्काल जाँदा सही हुने यादवको भनाइ रहेको छ ।आजको समयबद्व साप्ताहिकमा खबर छ ।